TradingView Desktop: Ahoana ny fametrahana an'ity app DeFi ity amin'ny GNU / Linux? | Avy amin'ny Linux
TradingView Desktop: Ahoana ny fametrahana an'ity app DeFi ity amin'ny GNU / Linux?
Araka ny hitantsika, indrindra tamin'ity taona ity tamin'ny Internet, ny lazan'ny sy ny Fampivoarana ny lozisialy for GNU / Linux do Fanapahana DeFi. Andeha ho tadidintsika izany DeFi o Vola itsinjaram-pahefana izy ireo fironana ara-teknolojia loharanom-baovao misokatra, izay mitranga manodidina ny teknolojia blockchain farany teo amin'ny tontolon'ny ara-bola.
Mihombo hatrany io fironana io isan'andro noho ny fiakaran'ny vidim-piainana Cryptocurrencies. Ary koa, noho ny filàna rafitra fandoavam-bola nomerika azo antoka, haingana, azo antoka ary tsy miankina sy fifanakalozana ara-bola. Ary noho io antony io, anio dia hizaha rindrambaiko mahaliana iray hafa amin'ity faritra antsoina hoe ity isika "Desktop TradingView". Izay mety amin'ny manara-maso ny satan'ny cryptocurrency amin'ny Internet, ankoatra ny zavatra hafa.
Ary satria, ity Tetikasa fampiharana DeFi Tena mitovy amin'ny iray hafa nitovy izay efa nojerena sy nozaraintsika teo aloha, hiala eo no ho eo ny rohy voalaza Lahatsoratra mifandraika miaraka amin'izy ireo. Ka raha ilaina dia vakiana mora foana izy ireo amin'ny faran'ny famakiana ity boky ity:
"Cryptowatch Desktop dia rindranasa birao multiplatform novolavolaina hahafahan'ny mpampiasa azy, eo an-toerana avy amin'ny solo-sain'izy ireo, hanangana dashboard ho azy ireo mba hahafahan'izy ireo miasa amin'ny fotoana tena izy ary manara-maso ny tsenan'izao tontolo izao mahaliana crypto." Desktop Cryptowatch: Fampiharana hanaraha-maso ny tsena crypto manerantany
1 TradingView Desktop: App ho an'ny mpivarotra tsena crypto
1.1 Inona ny tranokala TradingView?
1.2 Inona ny fampiharana TradingView Desktop?
1.3.1 Sarin'ny sary
TradingView Desktop: App ho an'ny mpivarotra tsena crypto
Inona ny tranokala TradingView?
Raha ny filazany ihany tranokala ofisialy, voalaza toy izao manaraka izao:
"Tambajotra sosialy izahay miaraka amin'ireo mpivarotra sy mpampiasa vola 30 tapitrisa izay mampiasa ny tabilao tsara indrindra sy ny fitaovana fandinihana eto amin'izao tontolo izao hahitana ny fahafaha-manao amin'ny tsena manerantany. Aza adino ny fotoana hanarahana ny fananana tianao indrindra, mahita hevitra ara-barotra, mifampiresaka amin'ny hafa, mahita ny fironana ary mivarotra mivantana amin'ny sarinay." Momba ny TradingView
Inona ny fampiharana TradingView Desktop?
Araka ny hevitry ny Fizarana ofisialin'ny Desktop TradingView, hoy ity fampiharana ity:
"Rindrambaiko biraonao izay ahafahanao mamerina miaina ilay traikefa nahafinaritra an'ny mpampiasa ny tranokala TradingView mivantana avy amin'ny biraonao. Ary amin'ny tranga sasany, na dia mahatsapa hery bebe kokoa aza, hafainganam-pandeha sy malefaka, samy manana UX fanta-daza avokoa. Izy rehetra dia mikendry ny hanome tontolo iray tokana ny toerana tsara indrindra hanaraha-maso sy hamakafakana ireo tsena mifandraika amin'ny vola crypto."
Na izany aza, misy GNU / Linux Distro izay manohana ny fampiharana miorina amin'ny anatn'ny. Izay hany endrika fonosana Linux azo alaina ankehitriny "Desktop TradingView".
Ho fanampin'izay ary hatramin'ny fampiharana "Desktop TradingView" Miorina amin'ny Snap format fantatra fa ny GNU / Linux Distro Tokony hampiasa ianao Systemd. Noho izany, hampiasa izahay MX Linux nanomboka tamin'ny Rafitra boot GRUB amin'ny safidinao miaraka amin'ny "Atombohy amin'ny Systemd". Raha tokony ho ny safidinao default, izay tsy misy Systemd na aleo miaraka Systemd-shim.
Ho an'ny misintona, mametraka ary mampiasa, ary mieritreritra fa tsy manana ny endrika fonosana Snap napetraka ianao dia ireo no baiko baiko hampihatra amin'ny terminal (console) an'ny Operating System anao:
Aorian'io dia mijanona fotsiny ny mihazakazaka "Desktop TradingView" avy amin'ny menio fampiharana de GNU / Linux Distro ampiasaina.
naoty: Raha mila fanazavana fanampiny momba ireo dingana ireo amin'ny tsirairay GNU / Linux Distro azonao jerena izao manaraka izao rohyfa, ho an'ny na miankina amin'ny Debian Distros, azonao atao ny mizaha mivantana ireto manaraka ireto rohy.
naoty: Ity fampiharana maimaim-poana dia sady tsy maimaim-poana no tsy misokatra, fa mety ho tena ilaina ho an'ny tia Cryptocurrencies, amin'ny Operating Systems maimaim-poana sy misokatra.
Raha tsorina "Desktop TradingView" dia mahaliana sy mahasoa Fampiharana Desktop (GUI) noforonina ho an'ireo mpampiasa mazoto ny Tontolo DeFi. Ary manokana ho an'ireo izay isan'andro isan'andro mpivarotra (mivarotra izy ireo) samy hafa Cryptocurrencies isaky ny orinasa ary mila manara-maso ny tsena crypto manerantany amin'ny fotoana tena izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » TradingView Desktop: Ahoana ny fametrahana an'ity app DeFi ity amin'ny GNU / Linux?
Lahatsoratra tena tsara ho an'ireo izay miankina amin'ny rindrambaiko hanova vola amin'ny fireneny
Miarahaba, Paul Cormier. Misaotra tamin'ny hevitrao. Eny, azo antoka fa fampiharana tsara ho an'ireo izay tia Cryptocurrencies sy izay mampiasa GNU / Linux. Manantena isika fa ny TradingView Desktop sy ny CryptoWatch Desktop dia ho maimaimpoana tanteraka na hisokatra tanteraka na, raha tsy misy izany dia hivoaka ny hafa izay maimaimpoana 100 na hisokatra ho tombontsoan'ny rehetra.